Tap Tap Titan - Idle Evil Clicker 1.15.9 အန္းဒ႐ိုက္ APK ကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ | Aptoide
Tap Tap Titan - Idle Evil Clicker ၏ ရွင္းလင္းခ်က္
တစ်ဦးသည်ညစ်ညူးသောကြွယ်ဝသောထိပုတ်ပါကိုထိပုတ်ပါ trillionaire ဖြစ်လာပြီးနောက်, ဘဝငြီးငွေ့စရာရတယ်။ လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်တခြားကဘာလဲ? ဆိုးသောအင်ပါယာ Build နှင့်ကမ္ဘာကြီးကိုကြီးစိုးတစ်ရှာပုံတော်သွား - duh!
ဒီအန္တရာယ်ပျော်စရာမကောင်းသောပျင်းရိ clicker ဂိမ်းမှာတော့သင်လျှို့ဝှက်အဖွဲ့အစည်းအတွက်အလုပ်မလုပ် - ဘေးဥပဒ်များ၏အဖွဲ့ချုပ်။ သေးငယ်တဲ့ထောင်ထဲနှင့်အနည်းငယ် henchmen နှင့်အတူစတင်ခြင်း, သငျသညျအာဏာနှင့်စည်းစိမ်ဥစ္စာကိုရန်သင့်လမ်းကိုအသာပုတ်အဲဒီနာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားလက်ချောင်းများအသုံးပြုရမည်!
ငှားရမ်း & သင့်ရဲ့ minions လေ့ကျင့်, ပြိုင်ဘက်လူကြမ်းအဖြစ်ကိုစစ်တိုက်ခြင်း, မှောင်ခိုစျေးကွက်အပေါ်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ကမ္ဘာအစဉ်အဆက်ကိုမြင်ခဲ့ပြီငှက်ကလေးကိုမကောင်းသောအ HQ ဖြစ်လာဖို့သင့်ရဲ့အခြေစိုက်စခန်းအဆင့်မြှင့်တင်!
TAP TAP Evil ကြိုးကိုင်သူ - HIGHLIGHTS
•မကောင်းသောထောင်ထဲက Start နှင့်ထရီလီယံရန်သင့်လမ်းကိုအသာပုတ်!
•, စုဆောင်းငှားရမ်းခြင်းနှင့်သစ္စာစောင့်သိ henchmen upgrade ။
•ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ & amp အားဖြင့်ကြီးမားသောအမြတ်အစွန်း Make; မှောင်ခိုဈေးကွက်အတွက်ကုန်သွယ်
•ပိုပြီးပျင်းရိကလစ် နှိပ်. ပါဝါအဘို့သင့်လက်ချောင်း Upgrade ။
•သင့် HQ Upgrade နှင့်မီးတောင်, လြှို့ဝှကျခခံတပ်, စန်တာရဲ့အလုပ်ရုံနှင့်ပိုပြီးပြောင်းရွှေ့!
•လက်တိုက်ခိုက်ရေးမှလက်ကို အသုံးပြု. ပြိုင်ဘက်လူကြမ်းအဖြစ်ကနေသင့်ရဲ့ထောင်ထဲကိုခုခံကာကွယ်။
•မကောင်းသောအပျင်းရိ clicker ပျော်စရာနာရီခံစားပါ။
★သစ်စာရှိ HENCHMEN တစ်ခု Army ဆော
သင်တို့၏အမှုကိုစောင့်ဖို့ henchmen စုဆောင်း - ဒဏ္ဍာရီနဲ့ Big မကောင်းပါ Wolf ကထဲကနေ Foxx ဖို့ Cyborg စီဇာတ်ကောင်သင့်ရဲ့ရှာပုံတော်မကောင်းသော titan ဖြစ်လာဖို့ကိုကူညီမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားသောစွမ်းရည်များရှိပါတယ်။ အရောင်းအ, Intel စုရုံးမှုနှုန်းနှင့်တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်များမှာသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုနှုန်းမှာတိုးတက်လာဖို့သင့်ရဲ့ henchmen Upgrade ။
မှောင်ခိုဈေးကွက်တွင် ★ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု & TRADE ကို
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသူဌေးကြီးအဖြစ်သင့်အသိပညာအသုံးပြုခြင်း, သင်သည်သင်၏မကောင်းသောအရှာပုံတော်တစ်အမြတ်အစွန်းတဦးတည်းဖြစ်စေခြင်းငှါအနက်ရောင်စျေးကွက်အပေါ်မေးခွန်းထုတ်စရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အရင်းအမြစ်များပိုမိုလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်နှင့်ကုန်သွယ်ရေးရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ မျှော်လင့် - - ကြည့်ရန်ဇယားသည်စျေးကွက်ခန့်မှန်းသည်သင်၏ henchmen သင်တို့အဘို့ကုန်သွယ်ရနှင့်အခြားထရီလီယံဒေါ်လာလုပ်! သင်ပရိသတ်တွေရဒါသူကပြောတယ်အဆိုးများအတွက်ဆုလာဘ်အဖြစ်အခမဲ့လက်ဆောင်များကိုရရှိပါလိမ့်မယ်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ!
★ပြိုင်ဘက် villain မှသင်၏ဌာနချုပ်ကိုခုခံကာကှယျ
သင်ကလမ်းတစ်လျှောက်အနည်းငယ်ရန်သူများကိုအောင်မပါဘဲတစ်ဦးကိုမကောင်းသောအထောင်ထဲကမတည်မဆောက်နိုင်သည်! ပြိုင်ဘက်လူကြမ်းအဖြစ်သင့်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ရုံးချုပ်ကိုတိုက်ခိုက်ပါလိမ့်မယ်နှင့်သင့် henchmen သင်ခုခံကာကွယ်ဖို့သူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါပိုကောင်းသင့် henchmen ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်, သူတို့ကတစ်ဦးရန်ပွဲကိုပြုကြပိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု။
★ Evil စစ်ဆင်ရေးသင့် base တိုး
စာသင်ခုံကိုထိပုတ်ပါတံခါးများ, အခိုးခံရအနုပညာလက်ရာများ, ဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းနည်းပညာနှင့်ပိုပြီးအမျိုးမျိုးနှင့်အတူဘေးဥပဒ်ကိုစစ်ဆင်ရေးသင့်ရဲ့အခြေစိုက်စခန်းပြင်ဆင်။ သင့်ရဲ့အခြေစိုက်စခန်းအနည်းငယ်သေးငယ်ရတဲ့သလဲ? ပင်ကို Santa ရဲ့အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ - တစ်ကောင်းကင်ပြာခံတပ်, မီးတောင် lair အပါအဝင်ပိုကြီးပိုကောင်း HQs ရွှေ့ရန်!
တစ်ကမ္ဘာလုံးယူ READY က? ယနေ့ဤဆိုးသောပျင်းရိ CLICKER GAME DOWNLOAD!
Tap Tap Titan - Idle Evil Clicker ကဲ့သို႔ေသာ အက္ပ္မ်ား
APK သတင္းအခ်က္အလက္ - Tap Tap Titan - Idle Evil Clicker